MarketerHire: Kwaunobhadhara Vetted Freelance Marketer | Martech Zone
MarketerHire: Kwaunobhadhara Vetted Freelance Marketer
Chipiri, Zvita 29, 2020 Chipiri, Zvita 29, 2020 Douglas Karr
Gore rino rave rakaomera masangano mazhinji. Kunyangwe iine anecdotal, matatu mafambiro andiri kucherechedza ndeaya:
Digital Nokuchinja - iyo yapfuura tarisiro yekunze kwevatengi ruzivo yakachinjira kune zvemukati otomatiki uye kusangana nemasangano makuru sezvo ivo vachideredza vashandi uye mari.
Matimu Ari Kure - nekuda kwekuchinja kuenda kunoshanda kubva kumba panguva yedenda, makambani akachinja mafungiro avo pakushanda kubva kumba uye vakavhurika kune kubatana kwekubatana.
Freelance Contractors - makambani makuru ari kuwedzera avo venguva yakazara vashandi nekontrakiti uye vekunze kushambadzira nyanzvi. Kubva ku "CMO yeHire" kusvika kune graphic designers ... makondirakiti ari kuve chikamu chakakosha chekambani yega yega.
Kwatingawane Ekushambadzira Freelancers
Kunyangwe paine huwandu hukuru hwemasaiti epamhepo kuti uwane tarenda, kune mashoma zviwanikwa zvinobatsira mukubvunzurudza nekugadzirisa tarenda iwe rauri kubvumirana. Zvakare, mazhinji emasevhisi anoda yakawanda yekutsvaga uye kubvumirana kwenguva uye mari yekumisa kunyangwe paine huwandu hwekukundikana.
MarketerHire ibasa rekuhaya tarenda risati ravhenekwa kuitira kuti sangano rako riwedzere mushambadzi anoonekwa kuchikwata chako pasingasviki vhiki! Ivo vanopa yakaderera yekuhaya fizi, hapana yekumisa fizi, uye vane yakaderera kwazvo kutadza chiyero chekuhaya awa, chikamu-nguva, kana izere-yenguva zviwanikwa.
Maitiro aMetereterHire Vets Vashambadzi
MarketerHire ine yakaoma freelancer yekuongorora maitiro uye ivo vashambadzi ivo pachavo - saka ivo vanotsvaga vakapupuridza nyanzvi neruchiva uye kutyaira. Mazana evashambadzi anoshanda mwedzi wega wega, asi MarketerHire inobhadhara chete isingasviki 5%. Ivo:
Tsvaga Vatambi Vepamusoro - ivo vanoongorora Facebook mapoka, maforamu, uye LinkedIn kuona uye kuongorora tarenda.
Mu-Kudzika Kweunyanzvi Kudzokorora - ivo vanoongorora ruzivo rwehunyanzvi, mutengi mhinduro, uye masampuro ebasa pamwe nehunyanzvi-hwakanangana nekuongorora.
Vhidhiyo Kubvunzana - kuongorora kugona kutaurirana, kufunga kwakadzama, uye hunyanzvi.
Bvunzo Mapurojekiti - mushure mekugamuchirwa, vavhoterwa vanopihwa chirongwa chekuyedza neicho chaicho-chenyika kuratidza kugona, kukwana, hunyanzvi, uye kuvimbika.
Kuenderera Kwakanaka - mashandiro anoongororwa nevatengi vhiki mbiri dzese kuti vaone sevhisi yepamusoro uye kutaurirana
Iyo MarketerHire Maitiro
Iwe uchabatana nemaneja wekushambadzira kuburikidza neese maitiro. Ivo vanozokurukura yako projekiti newe, batsira kuona izvo zvaunoda, uye ruoko-kuenzanisa iwe kune mushambadzi. Mushure mekunge muhoro wako watanga, vanozotarisa mukati kuti vaone kuti edu epamusoro matanho ari kuzadzikiswa.
Maitiro e MarketerHire inokurumidza uye isina musono:
Tsanangura chirongwa chako - Udza MarketerHire nezve yako projekiti. Uri kutsvaga imwe chiteshi nyanzvi kana kuvaka kunze kwakawanda-chiteshi timu? MarketerHire inoronga kufona newe kuti udzidze zvakawanda nezve chirongwa chako uye uwane nzwisiso iri nani yezvaunoda chaizvo.
Sangana nemushambadzi wako akakwana - Kana maneja wako wekushambadzira angonzwisisa purojekiti yako, ivo vachatsvaga yavo network yevatengesi kuti vawane mutambo wakanaka. Vaudze kuti unofarira mushambadzi akarumbidzwa uye ticharonga runhare rwekutanga kuitira kuti ugone kusangana navo woongorora chirongwa ichi. Kana iwe usina chokwadi nezve freelancer, ivo vanozoisa mamwe ma intros.
Bvisa chirongwa chako - Ukangobvumidza wako wekushambadzira, ivo vanogadzirira kutanga chirongwa uye kubatanidza muchikwata chako. Mutungamiri wako anoongorora-mukati mavhiki maviri ega ega. Kana pane chero chikonzero usiri kufara nemusika wako, ivo vanokufananidza newe nyowani.
Hapana kutumirwa basa, hapana kubvunzurudzwa, hapana kutemwa nemusoro… edza MarketerHire nhasi. Nzvimbo dziripo dzinosanganisira vatengesi veAmazon, vatengesi vemakambani, Chief Marketing Officers, vatengesi vezvinhu, vatengesi veemail, vashambadzi vekusimudzira, SEO vashambadzi, vanobhadhara vanotsvaga vekutsvaga, vezvenhau vezvemagariro, uye vanobhadharira vezvenhau.
Hire Vatengesi Nyorera seFreelancer
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu MarketerHire affiliate link mune ino chinyorwa.
Tags: vatengesi vanozvimiririramarketerhirevatengesikushambadzira freelancersakabhadhara ekutsvaga vatengesivanobhadhara vezvenhau vatengesibhadhara pakutsvaga vatengesivezvenhau veshambadzirovhidhiyo yevatengesi